Vaovao - Tsy azo apetraka ao amin'ny efi-trano misy haavo ambany haavo ve ny valindrihana miasa amin'ny valindrihana?
Nandritra ny taona maro nisian'ny varotra sy ny famokarana traikefa dia hitanay fa misavoritaka be ny mpanjifa sasany rehefa mividy jiro miasa.
Hoan'ny jiro miasa amin'ny valindrihana, ny haavon'ny fametrahana azy tsara dia 2.9 metatra. Saingy any Japon, Thailand, Ekoatera, na firenena afrikanina sasany, ny teatra fiasan'izy ireo amin'ny ankapobeny dia ambany noho ny 2,9 metatra ny haavony. Tsy afaka mametraka valindrihana ve izy ireojiro miasa?
Eto dia mila mametaka fanontaniana momba ny haavon'ny fametrahana isika, ary tsy maintsy manamafy amin'ny mpanjifa alohan'ny hametrahana baiko. Ny antsoina hoe haavon'ny fametrahana, izany hoe ny haavon'ny gorodona, dia manondro ny haavon'ny valindrihana haingon-trano mankany amin'ny tany, fa tsy ny haavon'ny tampon-trano mankany amin'ny tany. Mazava ho azy, mbola misy ny efitrano fandidiana sasany izay tsy manana ity valindrihana haingon-trano ity. Ho an'ity karazana efitrano fandidiana ity, ny haavon'ny fametrahana azy dia ny halaviran'ny tampon-trano mankany amin'ny tany.
Miverina amin'ny lohahevitra indray, karazana vahaolana inona no ananantsika amin'ny maha mpamatsy hazavana miasa antsika mandritra ny 20 taona. Azafady mba zahao ny fizotry ny varotra eo anelanelako sy ny mpanjifako vaovao Ekoatera.
Mividy jiro miasa LED lohan-doha ho an'ny toeram-pitsaboana biby ny mpanjifa. Alohan'ny hametrahana ny baiko dia ilaiko izy manome ny haavon'ny fametrahana. Ny sary etsy ambany dia ny fizotran'ny fandrefesana ny haavony nampodiny.
Voamarina ihany fa ny haavon'ny gorodona dia 2.6 metatra fotsiny, izay tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny haavon'ny 2.9 metatra.
Rehefa avy nandinika ny haavon'ny dokotera amin'ny ankapobeny sy ny haavon'ny fiakaran'ny latabatra fandidiana dia nanapa-kevitra ny handray drafitra fametrahana napetraka izahay.
Namboarinay indray ilay fitoeran-jiro ary nataonay sary hanamafisana ny mpanjifa. Manaiky ny drafitra volavolainay ny mpanjifa.
Rehefa avy nahazo ny entana sy nampiasa azy nandritra ny fotoana iray dia afa-po tanteraka ny mpanjifa.
Taty aoriana, raha nitsidika ny efitranony fandidiana vaovao izy, dia nandamina indray ny taratra LED loha loha ny sakaizany dokotera jiro miasa.
Eto aho dia misaotra fatratra ilay mpitsabo biby nanampy ahy. Izy io dia tsy maintsy vokatra azo antoka ary ny serivisy aorinan'ny varotra feno fiheverana dia nanetsika ny dokotera.
Amin'ny alàlan'ity tranga fifandraisana ity dia fantatray fa ny efitrano fandidiana miaraka amin'ny haavon'ny 2.6m dia mbola misy fepetra apetraka amin'ny valindrihana jiro miasa.
Saingy misy tranga maromaro hafa, toy ny haavon'ny efitrano fandidiana dia eo amin'ny 2.4m fotsiny, amin'ity tranga ity, manoro hevitra ny mpanjifa izahay hampiasa karazana rindrina jiro miasa na finday jiro miasa.
Ireto ambany ireto dia manana sary fametrahana ihany koa izahay raha hanondro.
Hatramin'ny vanim-potoanan'ny hazavana OT halogen ka hatramin'ny fahazavana LED OT, ny orinasanay dia efa manana traikefa efa ho 20 taona amin'ny famolavolana, famokarana ary fametrahana jiro fandidiana ao an-trano sy any ivelany.
Noho izany, amin'ny maha mpanjifa anao, raha manana fanontaniana momba ny jiro miasa, azonao atao ny manontany anay amin'ny pejy fanadihadiana, faly izahay mamaha izany.
Na dia tsy misy fifanarahana aza, ity traikefa amin'ny fifandraisana sarobidy ity dia afaka manampy antsika hanao drafitra tsara kokoa amin'ny fizotry ny varotra amin'ny ho avy.